Raw Lorcaserin Powder (616202-92-7) Vagadziri - Phcoker Chemical
Raw Lorcaserin powder ndeyekirasi yemishonga inozivikanwa se serotonin receptor agonists.Iyo inoshanda nekuwedzera manzwiro ekuzara kuitira kuti …… ..
Raw Lorcaserin powder (616202-92-7) vhidhiyo
Raw Lorcaserin powder (616202-92-7) Tsanangudzo
Raw Lorcaserin powder ndeyekirasi remishonga inonzi serotonin receptor agonists. Inoshanda nekuwedzera manzwiro ekuzara kuitira kuti zvokudya zvishoma zvidyiwe.Raw Lorcaserin powder inoshandiswa nechiremba-anobvumidzwa kuita zvekuita, kuchinja kwehutsika, uye kuderedzwa-calorie diet program kuti ikubatsire kupera muviri. Inoshandiswa nehuwandu hwehuwandu hwehuwandu hwevanhu, hwakadai sevaya vanorema kana vane zvinetso zvehutano zvine chokuita nekurema. Kurasikirwa uye kuichengeta kunogona kuderedza huwandu hwakawanda hwehutano hunouya nekudisa, kusanganisira chirwere chemwoyo, chirwere cheshuga, kukwirira kweropa, uye upenyu hupfupi.
Raw Lorcaserin poda inosarudzika 5-HT2C receptor agonist, uye in vitro kuyedza kwechirwere ichi kwakaratidza kusarudzika zvine musoro kwe5-HT2C pamusoro pezvimwe zvinangwa zvinoenderana. plexus, cortex, hippocampus, cerebellum, amygdala, thalamus, uye hypothalamus. Iko kumisikidzwa kwe5-HT2C receptors mune iyo hypothalamus inofanirwa kumisikidza proopiomelanocortin (POMC) kugadzirwa uye nekudaro inosimudzira kuonda kuburikidza nekuguta. Zvidzidzo zvekiriniki zvinoratidza kuti mushonga unogona kudzikisa huremu hwekurema uye kufutisa varwere, unogona kuvandudza metabolic parameter, uye inoregererwa zvakanaka. Raw Lorcaserin upfu hwehukama hweiyo 5-HT2c zana zvakapetwa kupfuura iyo 5-HT2B (valvular chirwere chemoyo njodzi), ine chengetedzo yakanaka, ndiyo yekutanga FDA-inogamuchirwa uremu-kurasikirwa mushonga mushure me100. Mugore reRaw Lorcaserin poda kurapwa, avhareji yekuremerwa uremu kubva pa5 kusvika 2 muzana.
Raw Lorcaserin powder (616202-92-7) Magadzirirwo
Kemikari Name Raw Lorcaserin powder;(R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine
Kirasi yeMishonga serotonin receptor agonists
Molecular Wsere 195.69
Freezing Point Hapana data inowanikwa
Biological Half-Life Iyo plasma hafu yeupenyu inenge maawa anenge 11.
Solubility Mvura inogadziriswa yakawanda kupfuura 400 mg / mL.
chengetedzo Temperature -20 ℃ Freezer
APane Kurapa kuneta, sechirevo chekuderedzwa-koriori yezvokudya uye kuwedzera kwekuita muviri.